Why do lovers treat Chocolaet on Valentine’s Day | The World of Pinkgold
Why do lovers treat Chocolaet on Valentine’s Day
Posted on February 5, 2009 by cuttiepinkgold
Cacao ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကနေ ကမ္ဘာမှာ အရသာရှိလှတဲ့ ချောကလက်ဆိုတာကို ရစေတယ်။ လူတိုင်းသိကြတာက Cacao (ကာကာအို) ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကနေရတဲ့ cacao အစေ့ကလေးတွေက (တခါတရံ cocoa bean လို့လည်းခေါ်ပါတယ်) ချောကလက်ကို ရစေတယ်လို့ပါ။ Theobroma ဆိုတာ ဂရိစကားလုံးဖြစ်ပြီး “ဘုရားသခင်၏ စားစရာ” လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်…. ဒီသစ်ပင် တွေရဲ့ ကနဦးအစကတော့ တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ Amazon Region ကပါတဲ့။
ဘီစီ 1000 လောက်တုန်းကတော့ ဒီ Cacao beans တွေဟာ စားသုံးရာမှာအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်… နောက်ပိုင်း ဘီစီ 1000 ကျော်တော့ Mayan နဲ့ Aztec ဆိုတဲ့ Mexico မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုးစုတွေဟာ cacao ကို သောက်စရာ အဖြစ်သုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ Mayan လူမျိုးတွေရဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုပွဲနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာ cacao ကိုသောက်သုံး ခြင်းဟာ အထူးအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်အဖြစ် ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ cacao ဟာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် စေတယ်လို့လည်း ယုံကြည်ကြတယ်။ ပီရူးမှာဆိုရင် ချောကလက်နဲ့ ငရုတ်သီးကိုရောပြီး စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် သောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အစာအိမ်အတွက်ကောင်းတယ်လို့ ပြောစမှတ်ပြုခဲ့တယ်တဲ့ ရှင်။ Aztecs ဆိုတဲ့ လူမျိုးစုတွေကတော့ ရိုးရိုး နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေမှာ ကုသနိုင်တယ်လို့ တွေးခဲ့ကြပြီး သူ့မှာ ချစ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့ပါ ယုံကြည်ကြတယ်… (ဒါကြောင့်မို့ ချစ်သူများနေ့မှာ ကျွေးတာကို… ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်ကိုပြန်ချစ် လာနိုင်အောင်.. ချစ်ပြီးသားလူက ပိုထပ်ချစ်အောင် ကျွေးတာနေမှာပေါ့…) သူတို့ရဲ့ အကြီးအကဲတစ်ယောက်က ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ချောကလက်နဲ့ ငရုတ်သီး ရောထားတဲ့အရည်ကို အခွက် ငါးဆယ် သောက်ခိုင်းလေရဲ့။ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လို့တဲ့လေ။
ဘီစီ ၁၅၀၀ အစောပိုင်းတုန်းက Christopher Columbus ဟာ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် Atlantic ကို ဖြတ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်အလယ်ပိုင်းက Honduras ရဲ့ကမ်းရိုးတန်းကိုရောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှ သူဟာ cocoa beans ရဲ့ တန်ဖိုး ရှိပုံကို ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေရိကန်အလယ်ပိုင်းရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာ cocoa beans ကို ငွေကြေးတစ်ခုအနေနဲ့ သုံးစွဲနေလို့ပဲ… (ချောကလက်မဖြစ်ခင်တောင် တော်တော်အရေးပါတယ် နော်)။ ရာစု ၆၀ ခုနှစ်လောက်ရောက်တော့ ချောကလက်ကို စပိန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Hernando Cortez ဆိုတဲ့လူက စပိန်ကို သယ်ဆောင် လာခဲ့ပါတယ်။ စပိန်လူမျိုးတွေက အရသာရှိအောင် သကြားတို့ ဗနီလာအစရှိတဲ့ အရာတွေကိုရောပြီး ချိုအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်ကျတော့ ချောကလက်ဟာ ပြင်သစ်ဘက်ကို ချောကလက်ချစ်တဲ့ စပိန်မင်းသမီး Anna နဲ့ Louis XIII တို့လက်ထပ်ပြီး ၁၇ ရာစုနောက်ပိုင်းမှာ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ချောကလက်ရဲ့ ကျော်ဇောမှုဟာ ဒီမှာတင်ရပ်မသွားပါဘူး…နောက်ပိုင်း Europe နဲ့ America ဘက်တွေကိုပါရောက်သွားတာပေါ့….. အဲဒီအချိန် အာရှဘက်မှာ ချောကလက်ကိုမွေးစားနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံကတော့ ဖိလစ်ပိုင်လေ.. သူက ၁၆ ရာစုလောက်က စပိန်လက်အောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့လို့မွေးစားနိုင်တာတဲ့…. ရွှေမင်းသား ချောကလက်က ကျော်ဇောလာတော့ cocoa အပင်ကိုစိုက်ချင်တဲ့လူတွေကလည်း ခပ်များများပေါ့…. အာဖရိကက အခိုင်းအစေတွေကို အမေရိကက ၀ယ်ယူခဲ့တဲ့ အဲဒီအချိန်က အကြောင်းရင်းကလည်း cocoa အပင်တွေ စိုက်ဖို့တဲ့လေ… နောက်ဆုံးတော့ cacao သစ်ပင်တွေဟာ အာဖရိကမှာ စိုက်ဖို့အတွက် မျိုးယူသွားခြင်း ခံရတော့တာပေါ့…. ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ အာဖရိကမှာ cacao စိုက်ပျိုးရေးဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်းနှုန်းနီးပါး ရှိတယ်ဆိုပဲ။
ကဲ… စဉ်းစားကြည့်ပါဦး.. ဘယ်သူကများ ချောကလက်တစ်ခုက ဒီလောက်သမိုင်းကြောင်းရှည်တာဆိုတာ တွေးမိ ကြရဲ့လား။ အခုစားနေကြတဲ့ ချောကလက်တစ်ခုမှာ လူတွေသိတဲ့ chemical အခု သုံးရာကျော်ပါ ပါတယ်။ မသိသေးတဲ့ဓာတ်တွေ ရှိသေးလား မသိဘူးနော်။ အဲဒီဓာတ်တွေထဲမှာ… လူတော်တော်များများသိတဲ့ ဦးဏှောက်ကို တက်ကြွစေတဲ့ ကော်ဖီမှာလဲပါဝင်သော ကာဖိန်းဓာတ် (caffeine) လည်း ပါတယ်တဲ့… ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ချောကလက် စားသုံးတဲ့လူဟာ ကမ္ဘာမှာ တစ်နှစ်ကို တန်ချိန်ပေါင်း ၆ မီလီယန် ရှိတယ်တဲ့။ (ဘယ်တုန်းကကောက်ထားတာလဲတော့မသိ)
ချောကလက် စားခြင်းဟာ လူရဲ့ စိတ်ကိုကျေနပ်စေတယ်… ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေရစေတယ်…. တစ်ချို့ အစားအသောက်တွေကို လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ… စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေတာကို တွေ့ရတယ်တဲ့… ဥပမာ.. ချောကလက်၊ ရေခဲမုန့်… မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ …. စိတ်တိုလာရင် စိတ်ဖိစီးမှုများလာရင်… အစားများများ စားလေ့ရှိတယ်လို့လည်း စစ်တမ်းတွေကပြောထားတယ်… (ဟုတ်နိုင်တယ်… တစ်ခါတစ်လေစိတ်ညစ်လာရင်.. မုန့်တွေမျိုးစုံအောင် စားတော့တာပဲ….ကိုယ်တွေ့)။ ကဲ … ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာကြောင့် ချောကလက်ကျွေးတာလဲသိပြီပေါ့နော်… ကိုယ့်ချစ်သူကိုယ့်ကို ပိုချစ်လာအောင်…. ကျွေးတာဆိုတာ အခုမှသိတော့တယ်။
ကျွန်မလည်း ချောကလက်တွေ အများကြီး ကျွေးချင်လိုက်တာနော်။ ကိုယ်တိုင်တော့ သိပ်အများကြီး မစားချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို များများချစ်အောင် ကိုယ်ကပဲ ကျွေးချင်တာ။ ဟဲ ဟဲ။
Source: IIS Forum, Inforithm-Maze
Filed under General Knowledge and tagged love, valentine |	8 Comments
အိမ် on February 5, 2009 at 11:18 am said:
ကြားတော့ ကြားဖူးတယ်ဗျ ဒီလောက်မစုင်္လင်ဘူး ခုမှပဲသေချာသိတော့တယ်။ မှတ်သွားတယ်ဗျို့
kaungkinko on February 6, 2009 at 12:29 pm said:
သြော်၊ ခုတော့ မစိမ်းရွှေ ဖြစ်သွားပြိပေါ့။ ဟီးဟီး 😀
mtj on February 7, 2009 at 9:52 am said:
ဖတ်ရင်းနဲ့ သွားရည်တောင် ကျလာပီ။ ၀ယ်ကျွေးကြပါ 😀
orchid on February 8, 2009 at 6:07 am said:
အမရေ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။cacao နဲ့cocoa က တူတူပဲလားဟင်။ စာတွေထဲမှာ cacao ကော၊cocoa ကောတွေ့လို့ပါ။ တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့နော်။
cuttiepinkgold on February 8, 2009 at 6:16 am said:
cacao ဆိုတာက သစ်ပင်ပါရှင်။ cocoa ဆိုတာက cacao သီးရဲ့ အစေ့ပေါ့။ ချောကလက်ထုတ်ရင် အဲဒီ ကိုကိုးစေ့ကနေ ထုတ်တာလေ။ အပင်ကို ကာကာအို ဟုခေါ်ပြီး အဲဒီအပင်ကသီးတဲ့ အသီးရဲ့ အစေ့ကို ကိုကိုးလို့ ခေါ်ပါတယ်ရှင်
exiter on February 8, 2009 at 8:42 am said:
ချောကလတ်ရဲ့ အကြောင်းကိုအခုမှသေချာသိတော့တယ်… 😀
ဒူကဘာ on February 8, 2009 at 10:53 am said:
အတော်စုံလင်စွာ သိလိုက်ရတယ်၊ ဒီအပါတ် ဒူကဘာတို့ ဆီက ချောကလက်ပွဲတော် သွားလည်ဦးမှ…..။
မသက်ဇင် on February 8, 2009 at 8:35 pm said: